हरिपुरमा राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण
कमलामाई खबर सम्वाददाता प्रकाशित: २०७८-६-१८ गते १२२ पटक हेरिएको
सर्लाहीको हरिपुरमा राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम कुमार महतोको अध्यक्षता तथा हरिपुर नगरपालिका नगर प्रमुख जमिरुदिन मन्सुरको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतोले राष्ट्रिय परिचय पत्र बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । राष्ट्रियपत्र के हो ? यो किन लिनु पर्छ ? कुन कुन कागजात आवश्यक पर्छ ? जनप्रतिनिधिहरुको भुमिका के हो ? जस्ता विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतोले प्रष्ट पार्नु भएको थियो । जिल्लामा हाल सम्म ९ वटा स्थानीय निकायमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको जिल्ला प्रशासन कार्यलय सर्लाहीले जनाएको छ । हरिपुर्वा नगरपालिका,चन्द्रनगर गाउँपालिका, ब्रह्मपुरी गाउँपालिका र पर्सा गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन भई रहेको छ ।
हरिपुर नगरपालिकामा असोज २२ गते देखि अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हरिपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । कार्यक्रममा हरिपुर नगरपालिका उप प्रमुख रेणुका काफ्ले, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुमार दास, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौर, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गंगाराम श्रेष्ठ, अनुसन्धान उप निर्देशक दिलीप कुमार सिंह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सर्लाहीमा हाल सम्म १ लाख ८१ हजार ९ सय ३ जनाको राष्ट्रिय पत्रको विवरण संकलन भई सकेको छ । निर्धारीत प्रगति प्रतिशत ७० मा हाल सम्म ६९.६४ प्रतिशत प्रगति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यलय सर्लाहीले जनाएको छ ।